Maqaalka Nikhil Raj ee Martech Zone
Maqaallada by Nikhil Raj
Axad, Maarso 17, 2013 Talaado, September 24, 2013 Nikhil Raj
Waxaan dhawaanahanba waday tijaabooyin natiijooyinka Mashiinka Raadinta Google. Waxaan raadiyay ereyga WordPress. Natiijada WordPress.org ayaa dareenkeyga qabatay. Google wuxuu ku taxay WordPress iyadoo la raacayo sharaxaadda 'Semantic Personal Publishing Platform': U fiirso guntinta ay bixiso Google. Qoraalkan lagama helo WordPress.org. Xaqiiqdii, bogga ma bixinayo sharraxaad meta ah! Sidee Google u soo qaadatay qoraalkaas macnaha leh? Rumayso ama ha rumaysan, waxay ka heshay sharraxaadda mid
Waxaan daahfurnay arrin kale oo gaar ah shalay markii aan dib u eegnay waxqabadka mashiinka raadinta dabiiciga ah ee macaamiisheena. Waxaan dhoofiyay oo aan dib u eegay aragtida oo aan gujiyay xogta Google Search Console Tools waxaanan ogaaday inaanay jirin tirro hoose, kaliya eber iyo tirooyin badan. Xaqiiqdii, haddii aad rumaysan lahayd xogta Google Webmasters, ereyada kaliya ee waawayn ee taraafikada waday waxay ahaayeen magaca sumcadda iyo ereyo aad u tartan badan oo macmiilku ku sareeyay. Waxaa jira dhibaato, in kastoo.
Arbacada, December 12, 2012 Talaado, September 24, 2013 Nikhil Raj
Isku-hagaajinta Mashiinka Raadinta ee bogagga shabakadaha caalamiga ah had iyo jeer waxay ahayd maaddo murugsan. Waxaad ka heli doontaa talooyin fara badan khadka tooska ah laakiin ma aha inaad fuliso talo kasta oo aad maqasho. Waqti qaado si aad u hubiso macluumaadka aad ka hesho khadka tooska ah. In kasta oo khabiir ku qoray laga yaabaa, had iyo jeer macnaheedu maahan inay saxan yihiin. Xaaladda marka la eego, Hubspot wuxuu soo saaray ebook cusub 50 SEO & Talooyin Websaydh loogu talagalay Suuqa Caalamiga ah. Waxaan nahay taageerayaasha Hubspot iyo wakaaladeena